Afọ ọhụrụ ndị China na-abịa
site ha na 21-02-08
Ememme Afọ Ọhụrụ Ndị China na 2021 bụ February 12. N'oge Ememe Oge opupu ihe ubi, Han nke China na ụfọdụ agbụrụ pere mpe na-eme ememme dị iche iche. Ihe omume ndị a na-abụkarị ndị nna ochie na-efe ofufe, nwere ụdị n'ụdị na ọgaranya dị iche iche. ...
Anyị sonyere na Alibaba Core Merchant Training Camp izu gara aga
Amso Solar bụ otu ndị na-eto eto, yana ndị na-eto eto nke oge a abụghị naanị mkpa ụgwọ kamakwa gburugburu ebe ha nwere ike ịzụlite. Amso Solar abụwo ụlọ ọrụ nke na-elekwasị anya na ọzụzụ ndị ọrụ, anyị dịkwa njikere inyere ndị ọrụ ọ bụla aka iru mmepe onwe ha. Anyị kwenyere na ụlọ ọrụ trai ...
Mkpụrụ ndụ ndị dị ndụ na-edozi ihe ndekọ ọhụrụ, yana arụmọrụ ntụgharị nke 18.07%
Ihe ohuru OPV (Organic Solar Cell) teknụzụ nke Mr Liu Feng jikọtara na Mahadum Shanghai Jiaotong na Mahadum Beijing nke Aeronautics na Astronautics ka emelitere na 18.2% yana arụmọrụ ntụgharị gaa 18.07%, na-edekọ ndekọ ọhụụ. ...
Nkà na ụzụ ọhụrụ na fotovoltaic ụlọ ọrụ-transparant anyanwụ cell
Mkpụrụ ndụ ndị na-agbanwe agbanwe abụghị echiche ọhụrụ, mana n'ihi nsogbu ihe onwunwe nke usoro semiconductor, echiche a siri ike ịtụgharị n'ime omume. Kaosinadị, n'oge na-adịbeghị anya, ndị sayensị na Incheon National University dị na South Korea ewepụtala ezigbo ihe nchekwa anyanwụ ...
Kedu ihe ntanetị 9BB
N’ahịa na-adịbeghị anya, ị na-anụ ka ndị mmadụ na-ekwu maka 5BB, 9BB, M6 pịnye mkpụrụ ndụ ihe dị ka 166mm, na ọkara ndị anyanwụ na-egbutu. Nwere ike inwe mgbagwoju anya na usoro ndị a niile, gịnị ka ha bụ? Gịnị ka ha na-anọchi anya ya? Kedu ọdịiche dị n'etiti ha? N'isiokwu a, anyị ga-akọwa nkenke echiche niile akpọrọ ...
Kedu ihe bụ ihe ndị dị na ogwe igwe
Nke mbụ, ka anyị leba anya na ihe eserese nke mmiri. Etu dị n'etiti bụ mkpụrụ ndụ nke anyanwụ, ha bụ isi na isi ihe dị na mbara igwe. Enwere ọtụtụ mkpụrụ ndụ sel, ma ọ bụrụ na anyị tụlee site nha elele, ị ga-ahụ nnukwu ụzọ atọ nke anyanwụ ...
Ihe ngosi 2020 SNEC
14th SNEC jidere na 8th-10th August 2020 na Shanghai. Agbanyeghị na ọrịa a gbaruru ya oge, ndị mmadụ gosipụtara oke agụụ n'okwu a yana ụlọ ọrụ so na ya. Na nyocha, anyị hụrụ usoro ọhụụ ọhụụ na oghere ndị dị na mbara igwe na-elekwasị anya na wafers crystalline buru ibu, nnukwu njupụta, a ...